स्लिम बन्ने रहरले भयो यस्तो डरलाग्दो हालत , धन्न ज्यान बच्यो ! – Samabeshi Khabar
स्लिम बन्ने रहरले भयो यस्तो डरलाग्दो हालत , धन्न ज्यान बच्यो !
१० चैत्र २०७७, मंगलवार १२:१६ by Samabeshi Khabar
एजेन्सी, (ससं) । पछिल्लो समय सबैजसो युवतीलाई स्लिम बन्ने रहर हुन्छ । स्लिम र फिट देखिने चाहनाले ती युवतीहरुले अनेकौं उपायहरु अपनाउँछन् । तर, अमेरिकाको न्यूयोर्ककी एक युवतीको लागि स्लिम देखिन डाइटिङ गर्नु उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भूल भएको छ।
यति बेलासम्म स्टेफनीलाई थाहा थिएन उनको यो गल्तीले उनको ज्यान नै जान सक्छ । २३ वर्षकी हुँदासम्म उनको तौल मात्रै २४ किलो बाँकी रह्यो । त्यसपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्यो । अहिले उपचार गराइरहेकी स्टेफनीले एक पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूले आफ्नो जीवनसँग सबैभन्दा ठूलो खेलवाड गरेको बताएकी छिन् । उनले आफ्नो तौल लगातार घट्न थालेपछि अब भने डाइटिङ रोक्नुपर्ने सोचेकी थिइन् । तर त्यसपछि उनको प्रयासले काम गरेन ।